Ganacsade Xaley lagu diley Magaalada Kismaayo – idalenews.com
Ganacsade Xaley lagu diley Magaalada Kismaayo
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee Gobalka Jubada Hoose ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa ay sheegayaan in xaley gudaha magaaladaasi kooxo hubeysan ay ku dileen mid ka mid ah Ganacsatada Magaalada xeebta leh ee Kismaayo sidda ay xaqiijiyeen dad deegaanka ah.
Ganacsadaha xaley lagu diley Magaalada Kismaayo ayaa waxa lasoo sheegayaa in la diley saalada Cishaha kadib xili uu kasoo baxay mid ka mid ah Masaajidyada ku yaala Magaalada Kismaayo,hase ahaatee waxaa toogtey kooxo hubeysan oo aan la ogeyn halka ay ka amar qaataan.
Kooxaha ayaa dadka deegaanka waxaa ay ku sheegeen iney ahaayeen ilaa iyo 3-ruux oo wajiga u duubnaa,laakin ay baxsadeen marka ay dileen ganacsadaha sida weyn looga yaqiiney Magaalada Kismaayo,waxaana Marxuumka ay rasasta kala dhaceen qeybaha sar ee jirta.
Lama oga sababta kooxaha hubeysan ay u dileen Ganacsade Aadan Sheekh Muuse,laakin marka dilka uu dhacey kadib ayaa waxaa goobta soo gaarey ciidamo ka tirsan Dowlada Soomaaliya oo wali ilaa saaka magaalada weybo ka mid ah ka wada howlgalo balaaran oo amaanka lagu xaqiijinayo.
Turkish Airlines oo Dadka u socda magaalladda Muqdishu ka mamnuucayso Khamriga
Maamulka G/Sh/dhexe oo ku baaqay in gurmad caafimaad loo fidiyo dadka ku dhaqan gobolkaasi